အင်ဒိုနီးရှားရေတပ် နဲ့ လေတပ်တို အမှုတာဝန်ထမ်းဆောင်မယ့် အမျိုးသမီးတွေကို အပျိုရည်စစ်ဆေးစမ်းသပ်တဲ့ အလေ့အကျင့်တွေကို စွန့်လွှတ်ဖို နောက် ထပ် ဖိအားအသစ်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်က ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာရှိလာခဲ့တဲ့ ဒီအလေ့အကျင့်ကို စွန့်လွှတ်ဖိုကြေညာခဲ့တဲ့နောက် အခုလို ဖိအားတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို Brisbane Times …
မိမိချစ်သူကောင်လေးက သစ္စာ ရှိမရှိကို မော်ဒယ်မလေး နဲ့ စမ်းသပ်မိတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ် ” လာပါ မိနစ် ၂၀ လောက်ပါဆိုတာ ဘာစကားလဲ
ချစ်သူ သစ္စာ ရှိမရှိကို မော်ဒယ်မလေးနဲ့ စမ်းသပ်မိတဲ့ အမျိုးသမီး ရဲ့ မလှတဲ့အဆုံးသတ် လက်တလောမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ ‘To CatchaCheater’ အစီအစဉ်ဟာ YouTube မှာလည်း အလွန်အောင်မြင်နေတဲ့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ အဲဒီအစီအစဉ်မှာ …
အောင်လအန်ဆန်း Vs ယူရှင်းအိုကာမီ Who is the Tiger ?
အောင်လအန်ဆန်း Vs ယူရှင်းအိုကာမီ Who is the Tiger ? အောင်လနဲ့ပတ်သက်ပြီး အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ ပွဲကောင်းတစ်ပွဲက ဂျပန်ဖိုက်တာကြီး အိုကာမီနဲ့ဆိုတာ သိုင်းလောကသားများအကြား လူပြောများနေကြပါတယ် …ဟုတ်ကဲ့ , ကျွန်တော့်အနေနဲ့လဲ ယင်းပွဲစဥ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပွဲကြိုသုံးသပ်ချက်များအား …